Weerar Naf Hurnimo Ah Oo Lagu Dilay Askar American. – Bogga Calamada.com
Weerar Naf Hurnimo Ah Oo Lagu Dilay Askar American.
November 14, 2017 7:07 am Views: 289
Camaliyad Istish-haadiyo ah ayaa lagu weeraray kolanyo ka tirsan ciidamada Nasaarada Mareykanka oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalka Qandahaar ee Konfurta Afghanistan.
Kolanyadan Americanka ayaa xilliga lagu weeraray Camaliyadda Istish-haadiyada ah waxey ku socdaalayeen wadada isku xirta deegaanada Galmaan iyo Karzaali oo ka wada tirsan gobalka Qandahaar.
Bayaan kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayey Imaaradu ku sheegatay mas,uuliyadda Camaliyaddaasi Istish-haadiyada ah waxeyna Imaaradu sheegtay in Camaliyaddaasi uu fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-aadiyiinta kaasi oo lagu magacaabo Cizatullaahi oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobalka Qandahaar.
Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa Bayaankan ku xusay in Camaliyaddan lagu dilay Afar iyo Toban askari American ah laguna burburiyay Labo gaari oo noocyada Gaashaaman ah kuwaasi oo qeyb ka ahaa gadiidka ay wateen kolanyadaasi American-ka ah.
Camaliyaddan ayaa noqneysa middii Saddex-aad oo muddo Todobaad ah ka dhacda gudaha Afghanistan Labada Camaliyood ee maalmo ka hor ka kala dhacay degmooyinka Lashkar-jaah iyo Nawah oo ka wada tirsan gobalka Helmand waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday inka badan (130)askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Kaabul.